Inomdla e-Interesting Roentgenium Element Facts
I-Roentgenium (Rg) yinto yesiqendu 111 kwitheyibhile yamaxesha . Kuye kwaveliswa iiathom ezimbalwa zale nxalenye yokwenziwa komsebenzi, kodwa kuqikelelwe ukuba yi-density, isistim e-metallic eqinile kwiqondo lokushisa. Nantsi iqoqo lezinto ezinomdla ezithandayo, kuquka imbali yayo, iipropati, ukusetyenziswa kunye nedatha ye-athomu.
I-Roentgenium Element Facts Facts
Ukubuza indlela yokubiza igama lento? I- RENT-ghen-ee-em
I-Roentgenium yenziwe kuqala yiqela lezentsimi zehlabathi ezisebenza kwi-Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) eDarmstadt, eJamani, ngoDisemba 8, 1994. Iqela, elikhokelwa nguSigurd Hofmann, liye laphuthuma i-nickel-64 kwi-bismuth-209 ukuvelisa i-atom enye ye-roentgenium-272. Ngo-2001, iqela eliSebenziseneyo le-IUPAC / IUPAP linqwenele ukuba ubungqina bungekho bubungqina bokufumana ubungqina bezinto, ngoko i-GSI iphinda iphinda iphinde ifumene i-athomu ezintathu ze-element 111 ngo-2002. Ngo-2003, i-JWP yamkele oku njengobungqina ukuba loo nto yenziwe ngokwenene.
Ukuba isigaba 111 sagqitywe ngokubhekiselele kwisiqununu esiyi- Mendeleev , igama layo liza kuba yi-eka-golide. Nangona kunjalo, ngowe-1979 i- IUPAC yacebisa amagama abanikezeli beendawo ukuba banikezelwe kwizinto ezingaqinisekisiweyo, ngoko de kube negama lesigxina ligqityiweyo, isigaba 111 sabizwa ngokuthi unununium (Uuu). Ngenxa yokufumana kwabo, iqela le-GSI lavunyelwa ukubonisa igama elitsha. Igama abakhethileyo lalingu-roentgenium, ngokuhlonipha isazi senzululwazi waseJamani owafumanisa i-x-ray, i-physicist Wilhelm Conrad Röntgen. IUPAC yamkele igama ngoNovemba 1, 2004, phantse iminyaka eyi-10 emva kokuqala kokuqala kwento!
I-Roentgenium kulindeleke ukuba ibe yinyithi , isicatshulwa esinobukhulu kumbindi wecala, kunye neepropati ezifana nezo zegolide. Nangona kunjalo, ngokusekelwe kumlinganiselo phakathi kombuso womhlaba kunye neyokuqala kwimeko ye- d- electrons zangaphandle, kuqikelelwe ukuba yinto yesiliva embala. Ukuba isalathiso esaneleyo 111 senziwa, i-metal iya kuba yinto elula kunegolide. I-Rg + iqikelelwe ukuba yincinci kunazo zonke ion isimbi.
Ngokungafani ne-congeners ye-lighter ene-cubic structure-centered structure for crystals, i-Rg kulindeleke ukuba yenze i-cubic crystals emzimbeni. Oku kungenxa yokuba ubuninzi bee-elektroni ukuxinisa kwi-roentgenium.
I-Roentgenium Data Atomic
Igama le-Element / Uphawu: Roentgenium (Rg)
Inomic Number: 111
Ukufumanisa: Gesellschaft für Schwerionenforschung, eJamani (1994)
Uqwalaselo lwe-Electron: [Rn] 5f 14 6d 9 7s 2
Iqela leQela : i-block ye-block 11 (Transition Metal)
Ixesha lexesha: i- 7
Ukuxinisa: I- roentgenium metal ithetha ukuba ubuninzi be-28.7 g / cm 3 kummandla weqondo lokushisa. Ngokwahlukileyo, ukunyamezela okukhulu kwanoma yiphina into elinganiswayo ngokumalunga nomhla ibe ngu-22.61 g / cm 3 ye-osmium.
Amazwe okuxhoma: +5, +3, +1, -1 (echazwe, kunye ne-+3 ekulindeleke ukuba ibe yona isisigxina)
Amandla okuQinisekisa: I-ionization yamandla iqikelelo.
1: 1022.7 kJ / mol
2: 2074.4 kJ / mol
I-3: 3077.9 kJ / mol
I-Atomic Radius: 138 pm
I-Covalent Radius: 121 pm (ukuqikelelwa)
Ukwakhiwa kweCriststal: i cubub egxilwe emzimbeni (echazwe)
I-Isotopes: 7 i-isotopes zomsakazo ze-Rg zenziwe. I-isotope enesistim, i-Rg-281, ine-half half life of 26 seconds. Zonke i-isotop eyaziwayo ziphantsi kokubola kwe-alfayili okanye i-fission ekhethiweyo.
Ukusetyenziswa kwe-Roentgenium: Ukusetyenziswa kuphela kwe-roentgenium kukufundwa kwenzululwazi, ukufunda kabanzi malunga nepropati zayo kunye nokuveliswa kwezinto ezinzima.
Imithombo ye-Roentgenium: Njengamanzi amaninzi, ama-radioactive, i-roentgenium ingaveliswa ngokufakela i-nuclei ye-athomu okanye ngokubola kwezinto ezinzima kakhulu.
Inetyhefu: I- Element 111 ayisebenzisi umsebenzi owaziwayo we-biological. Ibonisa ingozi yempilo ngenxa ye-radioactivity yayo.
Itheyibhile yeZakhono eziNgcitshisiweyo zokuNciphisa
Ruthenium okanye i-Ru Element Facts
Inomic Number 4 Element Facts
Iingcali zenzululwazi zizalise iTheyeri yePeriodic
Iimali zeSiliva - i-Chemical Element
Igolide Elimhlophe AyingeMhlophe Kuze Kuqhutywe
Iimpawu zoTshintsho - uLuhlu kunye neZakhiwo
Iindlela ezininzi zokusinda kweePine Trees
I-Best Bass Lakes e-Alabama
Iinkqubo zeNkundla eziPhakamileyo ze-US kunye neZigqibo
Ukutyhefuza iLizwi lobuxoki
IYunivesithi yaseBaltimore Admissions
I-Admission International University
Ukuthozama kunye neMimiselo yeNdlovu yeeMenitenteli zaseManyeni
Abalobi abahlanu base-Afrika nabamaMerika Bakhumbule
Imfesane Yomdlalo oPhambili
Isicwangciso se-400-Meter Race
I-Capricorn kunye nePisces Uthando olufanelekileyo
I-Architecture yase-El Tajin
IJografi yePeninsula yaseYucatan
Indlela yokuPhepha uVavanyo lweBar
Amacandelo asebenzayo ngokuphindaphinda
Gary Powers kunye ne-U-2 Isiganeko
Iingelosi Zemibala: Ukukhanya Okuluhlaza kuRay, Kukhokelwa ngu-Archangel Raphael
Ziziphi iinambuzane ezinjengeCricket kunye neCicadas Chirp kunye neNgoma